तिथि मेरो पत्रु » Spotting नक्कली अनलाइन Daters तत्काल घायलश्री गाइड
कहिलेकाहीं तिनीहरूले बस ध्यान आशा छौं. कहिलेकाहीं तिनीहरूले पत्रकार एक बिन्दु बनाउन खोज्नु. अनि कहिलेकाहीं तिनीहरूले बस घोटाला गर्न चाहनुहुन्छ. जस्तोसुकै प्रेरणा छ, इमानदार अनलाइन daters कूल्हा गर्न डिजाइन काल्पनिक प्रोफाइल - अनलाइन डेटिङ प्रोफाइल को एक महत्वपूर्ण भाग पूरा गर्दै छन् नकली. अनि तपाईं एक नजर राखन छैन भने, तपाईं अर्को शिकार हुन सक्छ.
यो छायाँ अभ्यास, रूपमा डब Catfishing, बर्बाद मानिसहरूको समय र पैसा हरेक एक दिन. अनलाइन daters को भारी बहुमत अद्भुत मान्छे हो, केही खराब अण्डा वहाँ बाहिर छन्. खुसीको, अनलाइन scammers को दराज मा तीव्र चक्कु नहुन गर्छन, त्यसैले तिनीहरू अक्सर चाल चलेको बन्द चुच्चो कि सरल भूलों बनाउन. तपाईं आफ्नो अर्को मिति असली सम्झौता हो भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ भने, रोमान्स तिर आफ्नो अनलाइन यात्रामा मनमा यी सरल सुझाव राख्न.
1) एक रिवर्स छवि खोज चलान
एक नक्कली खाता पनि नक्कली चित्रहरु अर्थ. अनलाइन swindlers एक नक्कली अनलाइन प्रोफाइल निर्माण गर्दा, तिनीहरूले सामान्यतया उनि इन्टरनेट बन्द पाउन तस्वीर समातेर छौँ. विशेष, तिनीहरूले पछि पाउन यिनै "तातो मान्छे" वा "गूगल तातो केटी।" तिनीहरूले पनि सकेसम्म लोभलाग्दो रूपमा आफ्नो प्रोफाइल बनाउन मोडेलिंग साइटबाट headshots अपलोड छौँ. के मूर्ख बनाएको छैन. आफ्नो अनलाइन तस्वीर नक्कल हो भने हेर्न सजिलो तरिका गुगल उल्टो छवि खोज चलाएर छ. आफ्नो प्रोफाइल तस्वीर इन्टरनेटमा सबै मदहोश छ भने, वा चित्र स्पष्ट कसैको सुहाउँछ भने, के तपाईं आफ्नो हात मा एक catfisher भयो थाहा छौँ.
2) अत्यन्त अंग्रेजी लागि हेर
आफ्नो प्रोफाइल तिनीहरूले राज्य अमेरिका मा जन्म र खडा थिए जस्तै तिनीहरूलाई प्रकट गर्दछ भने, तर आफ्नो व्याकरण बस भाषा सिक्ने व्यक्तिलाई जस्तै सुनिन्छ, कि एक विशाल रातो झण्डा छ. अनलाइन डेटिङ scammers विदेशी बारम्बार छन्. तिनीहरू माउन्ट Rushmore अमेरिकी रूपमा हुनुहुन्छ भनेर भन्नेछन्, तर वास्तवमा तिनीहरूले बस क्रम मा अमेरिकी मुद्रा लिन भन्न. आफ्नो अनलाइन paramour निरन्तर हिज्जे र व्याकरण गल्ती भने एक 3rd ग्रेड कक्षा मा उड थिएन, तिनीहरूले एक विदेशी scammer छौं हुन सक्छ.
3) एउटा अनलाइन पृष्ठभूमि चेक गर्नुहुन्छ
सार्वजनिक रेकर्ड तिनीहरूलाई देख्न चाहने सबैको लागि उपलब्ध छन्. त्यसैले अनलाइन तपाईं सम्पर्क व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका मा जन्म भएको थियो भने, तिनीहरूले एक सार्वजनिक रेकर्ड फाइल गर्नुपर्छ. आफ्नो नाम खोज, आफ्नो राज्य संग, एक अनलाइन सार्वजनिक रेकर्ड खोज मा. केही आउछ भने, कि तिनीहरूले तपाईं संग पूर्ण इमानदार भएर होइन छौं कि एक चिन्ह हो.
4) फास्ट अपरेटरहरु होसियार
कसैले अनलाइन हाम फाल्ने गर्न चाहनुहुन्छ भने "रही तपाईंलाई थाहा" र सम्बन्ध चरण "जीवनको लागि Soulmates" को सीधा जाने, तिनीहरूले एक भावुक रोमान्टिक छौं किनभने यो हुन सक्छ. तिनीहरूले आफ्नो हृदय देखि आफ्नो वालेटमा बढी रुचि राख्नु हुन्छ किनभने यो हुन सक्छ. अनलाइन scammers चाँडो भन्दा चाँडो आफ्नो चाहनाहरू कमाउन उत्प्रेरित हुने भएकोले, तिनीहरूले सुपर फास्ट कदम छौँ. Suspiciously छिटो. तपाईं एक भुँवरी अनलाइन रोमान्स फसिरहेका छौं भने, तिनीहरूले छौं सबै साँचो छ कि धीमा र डबल चेक दोस्रो लिन.
5) तिनीहरू केवल अनलाइन च्याट गर्न चाहनुहुन्छ भने हेर्नुहोस्
छ 100% सञ्चार इमेल र पाठ माध्यमबाट? कल वा अनुहार गर्न अनुहार पूरा गर्न एक इन्कार चरम लजाउने भन्दा बढी संकेत हुन सक्छ. यो तिनीहरूले झूट शङ्का गर्न तपाईं केहि दिन चाहँदैनन् भन्ने हुन सक्छ. पारदर्शिता असल सम्बन्ध महत्वपूर्ण छ. तिनीहरूले खुल्लमखुल्ला तपाईं कुराकानी गर्न सक्दैन भने, एक चिन्हको रूपमा उनीहरू सबै तपाईं चासो छैन भनेर लिन.
अन्तमा, तपाईं एक अनलाइन scammer द्वारा धोकामा पर्नुभएको गरिएको छु भने तिनीहरूले कुनै पनि पैसा बाहिर तपाईं swindled छु, संघीय सरकारको यो रिपोर्ट इन्टरनेट अपराध शिकायत केन्द्र. यो शर्मनाक एक बिट तपाईं मूर्ख बनाएको गरिएको गर्नुभएको स्वीकार गर्न हुन सक्छ, तर रिपोर्टिङ scammed हुनबाट अन्य मानिसहरूले रोक्न मदत गर्नेछ.